Xa ndandisesikolweni samakhredithi ndafumana umsebenzi we-gopher umsebenzi kwiNew York Daily News. Kodwa iphupha lam liza kuba ngumlobi weendaba ezinkulu kwidolophu enkulu, ngoko ngelinye ilanga ndibeka ndawonye amaphepha amnandi kwaye ndaya eofisini kwelinye labahleli bephepha.
Ndandizibhokoxa kumaphepha amaphepha amaphepha kwaye ndafumana umsebenzi phantsi kwebhanti lam. Ndandisebenza ngethuba lexeshana kwiphepha lemihla ngemihla xa ndandingumgangatho ophantsi kweso sikolo.
Ngoko ndambuza ukuba ngaba ndifumene oko kwathatha ukufumana umsebenzi wengxelo apho. Hayi, uthe. Hayi ngoku.
"Eli lixesha elikhulu," wandixelela. "Awukwazi ukuzenza iimpazamo apha. Hamba uye wenze iimpazamo zakho kwiphepha elincinci, uze ubuye xa usulungile."
Wa ye lungile.
Iminyaka emine kamva ndibuyele kwi-Daily News, apho ndasebenza njengomnyathelisi, inkulu ye-bureau ye-Long Island kwaye ekugqibeleni iphini likamaphephandaba welizwe. Kodwa ndenze njalo emva kokufumana amava e-newsroom aqinile kwi -Associated Press , amava andilungiselele amaqela amakhulu.
Uninzi lwezikolo zesikolo namhlanje zifuna ukuqala imisebenzi yazo kwiindawo ezifana neNew York Times, Politico kunye ne-CNN. Kuhle ukuba unqwenele ukusebenza kwiinkampani eziphezulu ezifana neendaba, kodwa kwiindawo ezinjalo, akuyi kuba nzima ukuqeqeshwa emsebenzini. Uya kulindeleka ukuba uthinte umhlaba osebenzayo.
Kulungile ukuba ungokoqobo, i-Mozart ye-journalism, kodwa iinqununu zeekholeji zifuna indawo yokuqeqeshwa apho zingaqeqeshwa khona, apho zikwazi ukufunda khona-kwaye zenze iimpazamo-ngaphambi kokuba zithinte ixesha elide.
Ngoko ke uluhlu lwam lwezona ndawo zilungele ukuqala umsebenzi wakho kwiindaba zoshishino.
Iimviwo zoLuntu ngeveki
Mhlawumbi awukhethi ukhetho olukhethekileyo, kodwa iiveki ezifutshane ezisebenzayo zinikela ngemisebenzi emitsha ithuba lokwenza into encinci yezinto zonke - bhala uphinde uhlele amabali, uthathe imifanekiso, wenze uhlaka, njalo njalo. Oku kunika iincwadana zentsha njengolwazi lwamagumbi aseburhulumenteni obanzi obuya kuba luncedo kamva.
Amancinci ukuya kumaMidiya asekuhlaleni
Amaphepha asekuhlaleni ayenamabhinqa amancinci kubanyatheli abancinci. Banikeza ithuba lokugubungela zonke izinto oza kuzibandakanya kumaphepha amakhulu - amakhophi , iinkundla, ezopolitiko zendawo kunye nezinto ezinjalo-kodwa kwindawo apho unokukwazi ukuzithoba izakhono zakho. Kwakhona, amaphepha emihle asekuhlaleni aya kuba nabacebisi, abathwali beendaba, kunye nabahleli abanokukunceda ufunde amaqhinga oshishino.
Kukho amaphepha amaninzi asekuhlaleni apho. Omnye umzekelo: I-Anniston Star. Iphepha elincinane kwidolophu elisezantsi-ntshona yeAlabama lingahle live ngathi liyindawo enomdla kakhulu ukuqala, kodwa iThe Star iye yaziwa ngokuba yi-journalism eqinileyo kunye nomoya wokunyundela.
Enyanisweni, ngexesha lokunyuswa kwamalungelo oluntu kwiminyaka yama-1960, i-Star yayingomnye wamaphepha ambalwa asemzantsi ukuxhasa ukuhlanganiswa kwesikolo. Igosa likaRhulumente likarhulumente, uGeorge Wallace, liqambe igama elithi "I-Star Star" ngenxa yokuzikhethela kwayo.
I-AP yenkampu yebhodi ye-journalism. Abantu abakwi-AP baza kukuxelela ukuba iminyaka emibini kwisevisi yocingo ifana neminyaka emine okanye emihlanu naphi na enye, kwaye yinyaniso. Uza kusebenza kanzima kwaye ubhale amanye amabali kwi-AP kunanoma yimuphi omnye umsebenzi.
Kungenxa yokuba ngelixa i-AP yintlangano enkulu yeendaba zehlabathi, ii-AP zama-freeaus zihlala zincinci.
Ngokomzekelo, xa ndisebenza kwi-ofisi yaseBoston AP sasinokuba mhlawumbi ngababini okanye abasebenzi abanjalo kwi-newsroom kwi-dayday shift shift. Ngakolunye uhlangothi, i-Boston Globe, iphephandaba elikhulu kunazo zonke, linabantu abaninzi ukuba kungengamakhulu abavakalisi beendaba kunye nabahleli.
Ekubeni ii-AP zamahhala zincinci, abasebenzi base-AP kufuneka bavelise ikopi eninzi. Nangona umnyatheli wephephandaba angabhala ibali okanye ezimbini ngosuku, umqeshwa we-AP angabhala amanqaku amane okanye amahlanu-okanye ngaphezulu. Isiphumo kukuba abasebenzi be-AP bayaziwa ngokuba banakho ukuvelisa ikopi ecocekileyo kwixesha elide kakhulu.
Ngeli xesha umjikelezo weendaba we-24/7 we-intanethi unyanzele ukuba abakhokeli beendaba bebonke babhale ngokukhawuleza, uhlobo oluthile olufumanayo kwi-AP luxabiseke kakhulu. Enyanisweni, iminyaka emine e-AP yandifumana umsebenzi kwiNew York Daily News.
Indlela yokubala inani leeAtom kwiDrop of Water
Funda indlela yokudweba
Ingakanani na imali eninzi?
Ezilishumi zeeNgcali eziPhambili kwiLizwe
'SpongeBob SquarePants' Imifanekiso
IiDassasaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala ZaseVirginia